အကိုရေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေအေးချမ်းပါစေနော် 17 Oct 08 09:51
ကိုဟရေ----ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားပေးပါတယ်ရှင်--- 16 Oct 08 19:05
ဘာပြောရမှန်း ဘယ်လို နစ်သိမ့်ရမယ် မှန်း မသိတော့ပါဘူး။ 16 Oct 08 16:46
ပြတိုက်ရှင်ရေ လာလည်ပါတယ် အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေဗျာ 16 Oct 08 13:01
ဆရာတေး ဆီမှာ အစ်ကို့အဖေသတင်းကြားလိုက်ရပါတယ်။ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းရပါတယ်။ 15 Oct 08 15:48
Heart Gyi yae.... Peace to be with you naw.... 14 Oct 08 22:55
ကိုကြီးဟတ်..သတိတရ ထပ်ရောက်လာပါတယ်.. 14 Oct 08 21:19
အကို့ဖခင် ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိနိုင်ပါစေ 14 Oct 08 09:25
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ ဗျို့.. လာချောင်းသွားတယ်၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... 14 Oct 08 08:37
မိဘကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကိုအညတရ အမြန်ဆုံး စိတ်ငြိမ်းချမ်းပါစေ... 13 Oct 08 14:20
ကိုအညတရရေ... ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းရပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ကြေကွဲနေမလဲဆိုတာလည်း နားလည်ပါတယ်။ 13 Oct 08 14:19
အစ်ကိုရေ့ ထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းရပါကြောင်း ဘဘကြီးကောင်းရာသုဂတိလားပါစေဗျာ။ 13 Oct 08 14:11
ပြတိုက်ကြီးရေ . . . အကို့အဖေ ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ . . . . . 13 Oct 08 05:56
ချဲလ်ဆီးဖန် အစ်ကိုကြီးအား မိသားစုနှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ဖန်များကလည်း ၀မ်းနည်းပါတယ် ခင်ဗျာ။ 13 Oct 08 02:04
Posted by Heartmuseum at 8:31 AM
အစ်ကို..ဒါလေးတွေပြန်တင်ထားတာ အရမ်းဝမ်းနည်းနေတယ်ထင်တယ် ဟုတ်တာပေါ့ ဘ၀အတွက် အစားထိုးလို့ မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပဲနီး၂နား၂မှာ သားကောင်းအဖြစ်ပြုစုခွင့်ရခဲ့တာဆိုတာနဲ့ ဖြေပေါ့ အစ်ကိုရေ့ ကျန်းမာရေးဂရုစ်ိုက်ပါ .......။
အကိုရေ .. ကြားကြားချင်းလာခဲ့တာ .. တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ..
May peace, love, and joy to be with you and your family.
ညီငယ် အိပ်မက်နက် ပြောပြမှ သိရလို့ပါ။ ထပ်တူဝမ်းနည်းပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံးထဲက မိ ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသူတယောက် ဖြစ်လို့ ဘ ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါလည်း ဘယ်လို ခံစားရမယ်ဆိုတာ သိနေခဲ့လို့ပါ။
အကိုရေ အရမ်းဝမ်းနည်းနေတယ်နော်။ တရားနဲ့ဖြေပါအကိုရယ်။ အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာ ညီနားလည်ပါတယ်အကို။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက်ဖြေပါနော်။ အကိုနဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစု အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေ ငြိမ်းချမ်းပါစေ လို့ ညီလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပါတယ်အကို။
လူဆိုတာ တနေ့ဆိုရင်တော့ ခွဲရမှာပဲလေ.. ခုလိုပြောတာ ကိုယ်ချင်းမစာလို့မဟုတ်ဘူးနော်.. မဗေဒါ မိဘတွေတစ်နေ့ခွဲခွာသွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်မိတိုင်းတောင်.. မဗေဒါ ငိုရတယ်.. ခုလဲ အစ်ကိုနေရာမှာဝင်ခံစားပြီးတော့ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာ.. ဒါပေမဲ့လဲ.. ကျန်ရစ်သူကတော့ ဘဝမှာ ဆက်ရအုံးမှာပဲ..
ပြုစု လုပ်ကျွေးခဲ့ တဲ့ မိဘအပေါ်မှာ တာဝန်ကျေခဲ့ တာလေးကိုဘဲ တွေးပြီး ဖြေယူပါ....။
အဖေ့ကို သတိရနေ တယ်နဲ့တူပါတယ်---
ကိုဟ ကို ခင်တဲ့